19 Apr 2019 . 11:11 AM
မင်းသားတစ်ယောက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်တာ ဘာဆန်းလို့လဲဆိုရင်တော့ ဒါက Jason Momoa ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
‘Game of Thrones’ နဲ့ ‘Aquaman’ တို့ရဲ့ မင်းသား၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ လူကောင်ထွားထွား၊ အပြုံးချိုချိုနဲ့ မင်းသား သူနဲ့ တသားတည်းလို ဖြစ်နေတဲ့ မုတ်ဆိတ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေကို ရိတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ။
မင်းသမီး Lisa Bonet ရဲ့ ယောက်ျား Jason Momoa ဟာ သူဒီလို မုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း YouTube မှာ တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Goodbye DROGO, AQUAMAN, DECLAN, BABA! I’m shaving this beast off, it’s time to makeachange,” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Video မှာ တင်ထားခဲ့သလို ဒီလို ရိတ်ခဲ့တာဟာ Canned Water အသစ်ထွက်တဲ့နေရာမှာလည်း ကြော်ငြာအဖြစ် အာရုံစိုက်မှုကို ရချင်လို့ လုပ်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Canned Water ဟာ Recycle လုပ်လို့ရတဲ့ Aluminium နဲ့ လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Momoa ရဲ့ ဒီလို မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြတဲ့ Video ဟာ တကယ်လည်း ပေါက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ YouTube မှာ Trending 30 အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ Momoa ကို အခုနောက်ပိုင်း အမြဲလို မုတ်ဆိတ်နဲ့ မြင်နေရာကနေ အခုလို မျက်နှာကြီး ရှင်းလင်းပြီးတွေ့လိုက်ရတော့ ပြောင်ချော်ချော် တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ တချို့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Momoa ရဲ့ ဒီပုံစံက တစ်မျိုးမိုက်နေမှာပါ။
အခရာပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော Momoa ရဲ့ ဒီအသွင်အပြင်ကို ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ၊ ကျွန်တော့်လိုမျိုးပြောင်ခော်ျချော်ဖြစ်တယ် ထင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် သူပိုနုသွားတယ်လို့ ထင်ပါသလား။